Ao Anatin’ny Tontolo Midadasik’ilay Sarimihetsika ‘Valerian’ , Misongadina Manokana i Okraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2017 2:26 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , русский, Magyar, Français, Español, English
Pikantsary nokiraina tamin'ny photoshop, nalaina tamin'ilay sarimihetsika noforonina “Valerian sy ny tanànan'ireo Planeta an'Arivony Maro”, ahitàna ireo mpanamory sambondanitra mitondra ny saina Okrainiàna ho toy ny lamba kely famantarana eny amin'ny tànan'akanjony, nozaraina tao amin'ny tambajotra sosialy..
Niteraka fihetsehampo kely teny anivon'ireo Okrainiàna mpampiasa media sosialy ny fisian'ny saina Okrainiàna ho toy ny marika famantarana eny amin'ny tànan'akanjon'ny mpanamory sambondanitra ao anatin'ilay sarimihetsika “Valerian sy ny tanànan'ireo Planeta an'Arivony Maro”.
“Valerian sy ny tanànan'ireo Planeta an'Arivony Maro” dia sarimihetsika frantsay noforonin'ilay mpanatontosa malaza , Luc Besson. Ny Jolay izy io no navoaka ary mety mbola halefa any amin'ireo trano sasantsasany fijerena sarimihetsika manerana izao tontolo izao. Mifototra amin'ilay andianà tantara an-tsary Valérian (1967-2010) an'i Pierre Christin sy Jean-Claude Mézières.
Ny manokatra ny sehatra ao anatin'ilay sarimihetsika dia fampidirana momba ny tantaran'ilay tontolo noforonina, ahitàna ny fanorenana ny Alpha, ilay toby goavambe any an'habakabaka, izay vita tamin'ny alàlan'ny fanambatambarana ireo vatanà sambondanitra avy ety an-Tany sy ny hita teny ambony tsy taka-maso teny ho lasa ilay toby iraisampirenena eny an-habakabaka amin'izao fotoana izao.
Aseho ho an'ny mpijery ny fahatongavan'ny tarik'ireo Okrainiàna mpanamory sambondanitra tarihan'ny vehivavy iray mitondra ilay saina eo amin'ny tanàn'akanjony, mitondra fanomezam-boninahitra sy karazana hafaliana samihafa ho an'ireo Okraniàna mpankafy tantara foronina .
Ohatra, ny sarimihetsika eto ambony dia fitambaran'ny sehatra manasongadina ireo Okrainiàna mpanamory sambondanitra, izay mandray tànana olona iray hafa, ary ny hira malaza tamin'ny 2014 “Podaj Rękę Ukrainie” (midika ara-bakitney hoe “Atsory ho an'i Okraina ny tànanao,” na “Tolory Tànana i Okraina”) an'ilay tarika Poloney Taraka. Aingam-panahy nakàna ny hira ireo hetsipanoherana Euromaidan tamin'ny 2013 sy 2014 nanoherana ny fanararaotana teo ambany fitondran'ny governemantan'ny filoha Viktor Yanukovych, ary nampiasaina hanangonana fanomezana ho an'ireo fianakavian'ny mpanao hetsipanoherana izay maty novonoin'ireo mpitily na taminà herisetra hafa. Noraisina ho toy ny marika io ho an'ny firaisankinan'ny Poloney sy ny Okrainiàna.
Ny sasany amin'ireo fifanakalozandresaka ety anaty aterineto koa dia nanazava ireo hevidiso sasantsasany naroson'ireo mafàna fo mpankafy sarimihetsika.
Bitsika 1: Ao anatin'ilay sarimihetsika nataon'i Luc Beson “Valerian sy ny tanànan'ireo Planeta an'Arivony Maro”, ireo Okrainiàna mpanamory sambondanitra no nisolo tena ny delegasiona avy ety an-Tany. Mitondra ny sainam-pirenentsika eny amin'ny tànan'akanjony ireo mpanamory sambondanitra.
Bitsika 2: Tsia. Misy delagasiona avy any Iràna, avy amin'ireo firenena Afrikàna, sy ny sisa koa. Tsy misy delegasionan'ny “Tany”. Ilay toby aza an-dry zareo Rosiana irery.
Marina amin'ny ampahany ihany io fanitsiana io, raha ny marina. Tetikasa iraisan'ireo masoivohon'i Etazonia (NASA), Rosia (Roscosmos), Japàna (JAXA), Kanadà (CSA) ary ny Masoivoho Eoropeàna ho an'ny Habakabaka (ESA) no manome ilay Toby Iraisampirenena eny an'Habakabaka .
Fangon'ny Masoivohom-Panjakana ao Okraina momba ny Tontolo an-Habakabaka. CC BY-SA 3.0, tao amin'ny Wikipedia.
Ankoatry ny maha-siansa noforonina azy, tena manana fandaharanasa marina tokoa momba ny tontolo eny an'habakabaka i Okraina, izay efa nanomboka tamin'ny 1930 tany ho any. Ny Masoivohom-Panjakana ao Okraina momba ny Tontolo an-Habakabaka (SSAU), natsangana tamin'ny 1992, no iray amin'ireo zaza navelan'ny fandaharanasa Sovietika momba ny tontolo an'habakabaka, ary nandova ireo foto-drafitrasa rehetra ao amin'ny firenena. Hatramin'ny 2014, nanatontosa fandefasana avy ao Kazakhstàna sy Rosia ilay masoivoho. Taorian'ny nanakambanan'i Rosia an'i Krimea ho zarataniny, nandefa zanabolana vitsivitsy ho eny an'habakabaka ilay masoivoho, tamin'ny alàlan'ilay Sea Launch, sehatra mitsingevana eny an-dranomasina ikambananà firenena vitsivitsy.
Raha marobe ireo Okrainiàna no niasa ho toy ny mpanamory sambondanitra Sovietika, i Leonid K. Kadenyuk no Okrainiana voalohany nisidina teo ambany faneva Okrainiàna tamin'i 13 May 1997.